Mavericks na-arụ ọrụ: Onye na-ego ọrụ? | Martech Zone
N’ọnwa gara aga ndị Indianapolis Marketing Book Club họọrọ Mavericks na Work ka akwụkwọ a ga-agụ. Ahụrụ m akwụkwọ n'anya, ma hụkwa akwụkwọ azụmahịa n'anya. Ulo m juputara na ha. M na-agụ nke a ma bido Ejila nri naanị gị: na ihe nzuzo ndị ọzọ iji nwee ihe ịga nke ọma, otu mmekọrịta na oge.
Mavericks na Work bụ otu n'ime ndị incredibly n'ike mmụọ nsọ akwụkwọ, ma m na na na na ma m na-na-'juruju ’ha. Tom Peters, Guy Kawasaki, Seth Godin, na ọbụnadị ndị enyi m na ndị ezinụlọ m na-agwa m ka m bụrụ Maverick.
Abụ m Maverick n'obi, mana ekwenyeghị m na ụwa chọrọ ọtụtụ mavericks. Ànyị?
Maverick: onye naanị ya na-ekwenye ekwenye, dịka onye ọgụgụ isi, onye na-ese ihe, ma ọ bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye na-ewere nguzo onwe ya iche na ndị otu ya.
A sị ka e kwuwe, ọ bụ na anyị achọghị ụmụ okorobịa ndị ga-edozigharị ụgbọ ala anyị, zaa ala niile, mee ka bọs na-agba ọsọ, ma lelee ụlọ ahịa ahụ? Everyzụ ahịa ọ bụla ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ iji kwalite Mavericks? Ọ bụghị na enwere m obi abụọ banyere mmụọ m na-achụ nta ego, enwere m obi abụọ na enwere ọtụtụ ohere maka Mavericks n'ebe ahụ.
Otu ezigbo enyi m jụrụ m otú akwụkwọ ahụ si amasị m. M zara ya, sị, “Ahụrụ m akwụkwọ a n'anya!”
Mgbe ahụ, m ga-alaghachi ọrụ. Ọ bụghị na ọrụ m anaghị ekwe ka m nwee mmetụta… ọ bụ naanị nke ahụ azụmahịa dum na ọ bụchaghị ekele maverick na-arụ ọrụ. Ha bụ ndị ekweghị na-ekwekọrịta n'ụkpụrụ, ndị nọ n'èzí, ndị na-akpata ọgba aghara. Ọtụtụ mgbe, m na-eche na ọ bụ Maverick na-ejedebe na-achọ ohere ọzọ - n'ihi na ọ bụ ebe ha hapụrụ.
Enwere m ihe ọjọọ na nke a?
Dec 18, 2006 na 2:29 PM
Echere m na ndị mmadụ nwere ike ịkwado onwe ha n'ihe ọ bụla ha na-eme .. ọbụlagodi ndị na-echekwa ụlọ na ndị na-arụ ọrụ ụgbọ ala. Echeghị m na anyị nwere ike inwe ọtụtụ mmadụ ndị kwụsịrị ime ihe naanị maka na “ọ bụ otu a ka ha dị” wee wee jụọ ajụjụ, kpebie ịga megide ọka, na nsonaazụ ya, meziwanye ụwa gbara anyị gburugburu.
Jenụwarị 26, 2007 na 10:14 PM
Ekwenyere m, nke a kpatara anyị ji nwee Jessie James onye na-arụ ọgba tum tum, Orange County Choppers, na-arụ ọgba tum tum. Ndi mmadu nile gha acho nkwekọrịta. Ì chere na ndị a niile bụ ndị conformists, kpọọ ya egwu na ndụ. ndia bu ihe atu. Abụ m onye ekweghị. Abu m onye ocha american nwanyi nke gara ulo akwukwo acupuncture. ọ bụ ogologo 3 afọ. abughi m onye asia. Aga m ekwu na nke ahụ bụ ịbụ ndị na-ekwekọghị n'ụkpụrụ. Anyị chọrọ ndị na-abụghị ndị na-ekwenye ekwenye
Dec 18, 2006 na 8:28 PM
Anaghị m ekwenyeghi ma anaghị m eme ihe ọjọọ, ọ nweghịkwa uru karịa nke ọzọ. Ekwenyere m na nnukwu ìgwè chọrọ 'ndị na-ebuli elu na ndị na-akwagharị'. Ndị na-eche ya na ndị nwere ike igbu na atụmatụ ahụ.
M nnọọ na-eche otú ọtụtụ mavericks ụlọ ọrụ nwere ike ijikwa ma ọ bụrụ na e nwere n'ezie ọ bụla ụkọ ha!
Dec 18, 2006 na 10:30 PM
Anọ m na-eche nke a, mana achọpụtara m - onye ọ bụla nwere ike ịbụ Maverick mgbe ụfọdụ, yana 'onye na-ebuli elu na ịkwaa' oge ndị ọzọ (ọbụlagodi na ọ chọrọ ịsụ ire ha). Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla atụ aro ime ihe niile n'ụzọ ọhụụ n'oge ọ bụla. Mana echere m na enwere ohere maka onye ọ bụla ịjụ ajụjụ ndị achọrọ ịjụ, ọkachasị “gịnị kpatara”. Na ahụmịhe m, ajụrụ ajụjụ a nke ukwuu.
Dee 21, 2006 na 10: 47 AM
Ekwenyere m. Anyị ga-enwerịrị ndị na-agbanye echiche ọhụrụ na nrọ banyere ihe nwere ike ịbụ. Dị nnọọ ka ọ dị mkpa, anyị chọrọ ndị mmadụ nwere ike ilekwasị anya na ịme ihe dị mkpa iji mee ka ụzọ ọhụrụ ahụ gaa n'ihu.
Enwere oge na ebe maka ha abụọ. Idu ike na-apụta mgbe a na-enyeghị gị echiche ọhụụ. Agbanyeghị, ịnọ n'ọnọdụ nwekwara ike ime mgbe a tụbara ọtụtụ echiche n'ime ngwakọta ma ọ nweghị onye dị njikere iji echiche onye ọzọ rụọ ọrụ.